Wararka Suuqa Kala Iibsiga Caawa: Chelsea Oo Miiska Saareysa Qiimaha Haaland. Robert Lewandowski Oo Ku Biiraya Real Madrid Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga Caawa: Chelsea oo miiska saareysa Qiimaha Haaland. Robert Lewandowski oo ku biiraya Real Madrid iyo Qodobo kale
Newcastle United ayaa wadahadalo la furtay Arsenal si ay amaah kale kula soo wareegto Joe Willock, sida ay qortay Times .
Iibinta Antoine Griezmann ayaa muhiim u ah Barcelona haddii ay rajeynayaan inay Lionel Messi ku sii hayaan Camp Nou, sida ay qortay Deportes Cuatro .
Sergio Ramos ayaa sheegay in Kylian Mbappe ay tahay inuu u aado Real Madrid maalin maalmaha ka mid ah, laakiin wuxuu rajeynayaa in weeraryahanku uu sii joogi doono Paris Saint-Germain xilli ciyaareedka 2021-22 ka dib markii uu yimid caasimada Faransiiska. Goal
Jadon Sancho ayaa ka gudbay tijaabada caafimaadka wuxuuna noqon doonaa laacib ka tirsan kooxda Manchester United 48-da saac ee soo socota gudaheeda, sida ay qortay Mirror .
Gunners ayaa u hamuun qabta inay soo xero geliso daafaca Brighton Arsenal ay diyaar u tahay inay kor u qaado dalabkeeda ku aadan daafaca Brighton Ben White. sida ay qortay Standard Sport
Tottenham ayaa kalsooni ku qabta in heshiis laga gaari karo daafaca Fiorentina Nikola Milenkovic, sida ay qortay La Nazione .
Barcelona ayaa ka caga jiideysa inay u ogolaato Antoine Griezmann inuu dib ugu laabto Atletico Madrid, sida ay qortay Sport.
Arsenal ayaa, sida laga soo xigtay Football League World , diyaarineysa dalab qaali ah oo ay ku dooneyso goolhayaha Sheffield United Aaron Ramsdale.
kooxda chelsea ayaa bilaabeysa in ay dalab ka gudbiso xidiga Haaland waxana ay miiska saarayaan lacag ku dhow 150 milan Sky Sports
Weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa lala xiriirinayaa inuu u wareegayo Real Madrid sannadka 2022 – sida laga soo xigtay AS .
Inter ayaa ka caga jiideysa inay la kulanto qiimeynta PSV ee Denzel Dumfries – sida ay qortay Calcio Mercato .
Milan ayaa dejisay qiimaha ay ku dooneyso ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee reer Norway Jens Petter Hauge – sida ay qortay Calcio Mercato .
Xiddiga Everton Thierry Small ayaa isha ku haya inuu ka tago xagaaga iyadoo lala xiriirinayo Manchester United iyo Arsenal – sida laga soo xigtay The Athletic .